PressReader - Isolezwe: 2018-11-08 - UTembo ubalisa ngabalimele
UTembo ubalisa ngabalimele
Isolezwe - 2018-11-08 - EZEMIDLALO - LUNGILE MAJOKA
UYABALISA ngabadlali bakhe abalimele umqeqeshi weSuperSport United, uKaitano Tembo, okubalwa kubona nokaputeni uDean Furman.
UTembo ukusho lokhu ngemuva kokuthi bekhishwe yiKaizer Chiefs emdlalweni we-quarterfinal yeTelkom Knockout ngempelasonto.
I-United ibicindezele kulo mdlalo esiwombeni sesibili kodwa yashoda ngawo amagoli. Omunye umdlali obengekho ngenxa yokulimala umgadli uBradley Grobler.
UGrobler uhlinzwe inyonga kade esekhombisa izimpawu zokubuyela efomini njengoba ubebhakuzisa amagoli kuMatsatsantsa a Pitori. Ngaphambi kokulimala ushaye amagoli ngesikhathi bekhipha iChiefs kuma-semi final eMTN 8. Lo mgadli ulimala nje ngesizini edlule uhlale ngaphezu kwezinyanga eziyisithupha elimele yona inyonga.
“Yebo (sibakhumbulile) laba, ngabadlali bethu abakhulu. UDean ukaputeni wethu usanda kuhlinzwa ehlombe cishe uzohlala engadlali izinyanga ezimbili kuya kwezintathu. Ngiyacabanga ukuthi isizini izophela engakabi esimeni sokuthi usengadlala. UBradley naye uhlinzwe enyongeni kungenzeka angabi khona isikhathi eside njengesizini edlule kodwa sinethemba ukuthi uzoshesha ukwelulama.
“Okuhle wukuthi u-Evans (Rusike) ukwazile ukudlala imizuzu ewu-45 okokuqala ngemuva kokuhlala amasonto ayisikhombisa elimele. Omunye umdlali esingeneyo esimkhumbule uFagrie (Lakay) owalimala kowamanqamu weMTN 8. UThabo Mnyamane yena wadlala imizuzu eyishumi walimala emdlalweni womlenze wokuqala owandulela owamanqamu weMTN 8.
“Siyashoda kodwa kumele sikhuthaze laba badlali abakhona ngoba nabo basayiniselwe ukuthi bazokwenza umsebenzi. Ukuzethemba bazokuthola ngokuthi sibadlalise futhi sibeseke,” kusho uTembo.
I-United isaqoqe amaphuzu awu-15 emidlalweni ayisishiyagalolunye ye-Absa Premiership. Emidlalweni emithathu edlule idlale ngokulingana. NgoMgqibelo izovakashela iFree State Stars eGoble Park ngo-8.15 ebusuku.
“Okuhle ngeqembu lami wukuthi sikhombisile ukuthi ngeke sivume ukuwa kalula. Sizolwa kuze kube sekugcineni. Manje sesibheke emdlalweni olandelayo. Sizolwela ukunqoba yonke imidlalo esiya kuyona,” kusho uTembo.
UKAPUTENI weSuperSport United uDean Furman ungomunye wabadlali abalimele nokuyinto ekhalisa umqeqeshi uKaitano Tembo